🥇 ▷ Xiaomi waxay si dhaqso leh uga bilaabi doontaa adeegyada bangiyada Hindiya ✅
Xiaomi waxay si dhaqso leh uga bilaabi doontaa adeegyada bangiyada Hindiya
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Xiaomi waxaa la rajaynayaa in ay bilaawdo adeeg deyn shaqsiyeed gudaha Hindiya toddobaadyada soo socda. Shirkaddu waxay amaahi doontaa dalka “Miredit” si ay u siiso dadka isticmaala amaahda ilaa Rs. 100,000. Adeeggu waa inuu ku bilaawdaa howlihiisa usbuucyada soo socda iyadoo ugu yar dulsaarka 1.8%.
Shirkadda Shiinaha ayaa ku tala jirta inay ka faa iideysato mowqifkeeda ah hormuudka u ah iibinta taleefannada casriga ah ee suuqyada Hindiya si ay uga hortagaan kooxaha adeegyada maaliyadeed ee dalka. Aasiya, Xiaomi waxay durba tartan adag kala kulmaysaa bangiyada, kooxaha teknolojiyada caalamiga ah, bilawga teknolojiyada dhaqaalaha iyo shirkadaha kale ee warshadaha. Laakiin qiyaastii 70 milyan oo isticmaalayaasha Xiaomi ee Hindiya, ayaa shirkadda Shiinaha ay rajeyneysaa inay awoodo inay ka soo baxdo.
Shirkadda weli waxay u baahan tahay inay dib-u-qiimeyn ku sameyso qaar ka mid ah hababka loo maareeyo macluumaadka macaamiisha. Macaamiisha Hindida ayaa si aad ah u daneynaya qarsoodiga macluumaadka, iyo kooxaha teknolojiyadda ah sida Google iyo Google Facebook waxay u baahnaayeen inay la kulmaan baahida shacabka dalka.
Manu Kumar Jain – Xiaomi Madaxweyne kuxigeenka iyo Maareenta Xiaomi India (Isha: Reuters / War Saxaafadeed)
Xiaomi maanta waa iibiyaha afaraad ee ugu weyn dunida casriga. Si kastaba ha noqotee, ganacsigooda wuxuu inta badan ku tiirsan yahay iibinta adeegyada si loo abuuro macaash muddo-dheer ah. Tani waxay u abuuri kartaa jawi aan shaki ku jirin shirkadda, taasoo soo sheegtay dakhligii niyad jabsan ee rubucii labaad.
Bishii Marso Xiaomi waxay ka furtay Hindiya adeegsiga lacag bixinta. Mi Pay wuxuu si wanaagsan u aqbalay dalka waana astaan ​​kale oo muujineysa in shirkaddu ay rabto in ay ballaariso ka qeybqaadashadeeda suuqa maxalliga ah. Ilo wareedyo ayaa u sheegay Reuters in “Waxay u muuqdaan inay raacaan hoggaamiyeyaasha suuqa, (sida) Apple iyo Google, halkaas oo taleefanka casriga ah uu noqon doono wax ka badan taleefanka, dhaqaaqa dhaqaalaha.”